တိုက်ပွဲခေါ်သံ | ကျွန်မ၏ခံစားမှုများ သီကုံးရာ လွတ်လပ်ခြင်းအနုပညာ
November 24, 2007, 3:38 pm
ကျွန်မ စိတ်ထဲရှိသမျှ တွေးမိသမျှအားလုံးကို ကျွန်မ လက်ဆင့်ကမ်းဝေမျှလိုက်သလို ကျွန်မကိုယ်တိုင်လည်း အရာအားလုံးမှာ အများကြီးလိုအပ်နေသေးတဲ့အတွက် အမြဲကြိုးစားနေရပါမည်။ ကျွန်မ နှလုံးသွေးထဲမှ စီးဆင်းလာသော ခွန်အားများဖြင့် ယုံကြည်ချက်များက ပိုမိုခိုင်မာနေလျက် .. ။ ကဲ … ယုံကြည်ချက်တွေခိုင်မာတဲ့ အမှန်တရားအတွက် `တိုက်ပွဲ´အဖြစ် သတ်မှတ်လိုက်တယ် .. ။
ညီကြလားဟေ့´ ……….. ။
Comment by Anonymous November 25, 2007 @ 5:31 am
Comment by Saung Yune La (aka) Way November 25, 2007 @ 6:25 am
Yes! We’re strongly united for our aim to Democratic Free Burma.
Comment by YeKyawAungMDY November 25, 2007 @ 6:36 am
Comment by YeKyawAungMDY November 25, 2007 @ 6:47 am
Comment by MN November 25, 2007 @ 7:08 am
Comment by chaos November 25, 2007 @ 7:55 am
သင်ပေးလိုက်ပါ ကြံဖွံ့တွေကို … ဒီကောင်တွေက ကွန်ပြူတာကို သူ့ပထွေး တွေ သင်တန်းပေးမှ မြင်ဖူးတဲ့ကောင်တွေ. ဒီကောင်တွေလောက်တော့ ဘားမား ဘလော့ကာတွေကပျင်းတယ်ဗျာ
Comment by Daniel November 25, 2007 @ 9:13 am
Comment by Aung Phyoe November 25, 2007 @ 12:02 pm
Comment by LASJP November 25, 2007 @ 7:19 pm
Comment by ကောင်းကင်ကို November 26, 2007 @ 3:44 am
Comment by ain November 26, 2007 @ 7:19 am
Ha Ha Ha Ha… USDA sucks. There is nothing to learn to blog.
Comment by Htoo Myat December 1, 2007 @ 12:41 pm
Comment by pi November 3, 2008 @ 5:40 pm